२४ वर्ष मै सिउँदो पुछिएकी देवीले जुत्ता सिलाएर बनिन सेलिब्रेटी, सबैले सम्मान स्वरुप सक्दो सेयर गरौ ! – Life Nepali
२४ वर्ष मै सिउँदो पुछिएकी देवीले जुत्ता सिलाएर बनिन सेलिब्रेटी, सबैले सम्मान स्वरुप सक्दो सेयर गरौ !
बाबुआमाको खुशीका लागि १६ वर्षको कलिलो उमेरमा डोली चढेकी साविकको रामपुर गाविस–२ दाङकी देवी नेपालीको २४ वर्षको उमेरमा सिउँदो पुछियो आम मानिसमा जस्तै जिन्दगी रंगीन बनाउने सपना उनमा पनि थिए। तर छोरी भएकै कारण देवीले आफ्ना लागिभन्दा पनि परिवारको खुशीका लागि समर्पित हुनुपर्थ्यो। अभाव र गरिबीका कारण ४ कक्षाको पढाइलाई बीचमै रोकेर घरधन्दामा लागेकी देवी चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा थिइनन्। जिन्दगी नितान्त आफ्नो थियो तर देवी सधैँ अरुकै लागि बाँचिरहनु पर्‍यो। जबर्जस्ती डोली चढेकी देवीको जबर्जस्ती सिउँदो पुछियो। उनले परिवारको खुशीका लागि सधैँ आफ्ना खुशी सुम्पँदै जानुपरेको बताउँछिन्।
यतिबेला देवी दुई सन्तानकी आमा बनिसकेकी थिइन्।श्रीमानको निधन हुँदा देवीको न त आर्थिक अवस्था सवल थियो न हातमा कुनै किसिमको सीप थियो जसका कारण श्रीमानको काजकिरिया सकेर देवी आफन्तको साथमा पुनः रोल्पा फर्किइन्। शुरुशुरुका दिनमा देवीको धेरै आँशु बग्यो। काखका सन्तानले बाबा खै भनेर प्रश्न गर्दा धेरैपटक उनी बीचबाटोमै भक्कानिएको सुनाउँछिन्। कतिपटक त मध्यरातमा छिमेकीले ढोका खोलेर देवीका आँशु पुछेको उनले अझै भुलेकी छैनन्। तर यसरी सधैँ रोएर बिलौना गरेर आफूलाई कमजोर बनाउनुभन्दा बरु केही गर्छु भन्ने धारणाको विकास भएपछि उनले श्रीमानले गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिन थालेको बताइन्।
उनलाई शुरुशुरुमा श्रीमानले मजधारमा ल्याएर छोडेको पसल सञ्चालन गर्न निकै गाह्रो भयो। तर विस्तारै उनको क्षमता विकास हुँदै गएपछि व्यापार राम्रो चलेको देवीले बताइन्। यसले विस्तारै उनको जीवनस्तरमा पनि सकारात्मक परिवर्तन हुन थाल्यो। तर दुःखको कुरा श्रीमानको निधन भएको करिब एक महिना नपुग्दै साढे दुई लाख रुपैयाँको तमसुकसहित साहु आएपछि उनी थप चिन्तित बनेकी थिइन्। तर पनि करिब एक वर्ष नपुग्दै उनले श्रीमानले लगाएको ऋण चुक्ता गरिन्। “शुरुशुरुमा धेरै रोएँ केही जान्दैनथेँ, कसैसँग बोल्न पनि आउँदैनथ्यो। जुत्ता तथा पसलमा भएका अन्य सामग्रीको मूल्य पनि थाहा थिएन। तर केही गर्छु भन्ने हिम्मत आएपछि सबै सहज बन्दै गयो” उनले भनिन्।
करिब दुई लाखबाट सञ्चालन भएको व्यवसाय हाल आठ लाख रुपैयाँ बराबरको पुगिसकेको छ। उनका दुवै छोरा सदरमुकामकै विद्यालयमा कक्षा ४ र कक्षा १ मा अध्ययनरत छन्। सम्पूर्ण घरखर्च कटाएर मासिक रु २०/२२ हजार बचत हुँदै आएको छ भने उनले कोहलपुरमा एउटा घडेरीसमेत लिइसकी छन्। ‘आफूलाई नीला ड्रेस लगाएर झोला बोकेर विद्यालय जाने रहर थियो पूरा हुन सकेन, अब यिनै छोरालाई पढाएर आफ्नो रहर पूरा गर्छु’, उनले भनिन्। सधैँ परनिर्भर बन्दै आएकी देवीलाई आफैँले कमाएर खर्च गर्न पाउँदाको मज्जा बेल्दै लाग्न थालेको छ। ‘समाजमा धेरै दिदीबहिनी आँशुमै डुबेर बाँचिरहनुभएको छ। उहाँहरुलाई पनि जीवनमा केही गरेर आत्मनिर्भर बन्न सल्लाह दिन्छु’, देवीले भनिन्।
Previous बिहेको पहिलो रात मात्रै होइन श्रीमानले मलाई कहिल्यै छोएनन् , म के गरु ?
Next पतिपत्नी बीच झ’गडा भइ रहन्छ भने अप्नाउनुहोस् यी उपाय
40 mins ago kriti